आज फेरी ह्वा*त्तै घ*ट्यो सुनको मूल्य ,यस्तो छ आजको ब*जार भा*उ ! – सिधा अनलाइन खबर
Sidha Kura | September 26, 2019 | Comments
काठमाण्डौ – नेपाली ब*जारमा आज सुनको मूल्य घ*टेको छ। बुधबारको तु*लनामा सुन तोलामा एक हजार रुपैयाँले घ*टेको नेपाल सुनचाँदी व्य*वासायी म*हासंघले जानकारी दिएको छ। म*हासंघका अनुसार आज बजारमा सुन प्रतितोला ७१ हजार रुपैयाँमा का*रोबार भइरहेको छ। मंगलबार तोलाको ७२ हजार पुगेको थियो। आज बजारमा ते*जाबी सुनको मूल्य तोलामा ७० हजार ७ सय रुपैयाँ छ। त्यस्तै बजारमा आज चाँदीको मूल्य पनि घ*टेको छ। मंगलबार तोलामा ८९० रुपैयाँ भएको चाँदी आज ८६५ रुपैयाँमा का*रोबार भइरहेको छ।
पछिल्लो समय नेपाली ब*जारमा सुनचाँदीको मुल्यमा उ*तारचढाव आइरहेको छ। त्यस्तै बिहीबार कोरियन वन बाहेक सबै विदेशी मुद्राको भाउ केही ब*ढेको छ । बिहीबार नेपाल राष्ट्रबैंकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११३ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर ११३ रुपैयाँ ९६ पैसा तोकेको छ । हिजो पनि खरिददर ११३ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर ११३ रुपैयाँ ९२ पैसा थियो । साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ३८ पैसा रहेको छ । हिजो खरिददर ३० रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ३७ पैसा रहेको थियो ।
बिहीबार कतारी रियाल १ को खरिददर ३१ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ २९ पैसा तोकेको छ ।बुधबार खरिददर ३० रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ १५ पैसा रहेको थियो ।आज ओमानी रियाल १ को खरिददर २९६ रुपैयाँ २४ पैसा रहेको छ। हिजो खरिददर २९४ रुपैयाँ ४१ पैसा रहेको थियो । यूएई दिर्हाम १ को खरिददर ३० रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ०३ पैसा छ ।हिजो खरिददर ३० रुपैयाँ ८५ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ०१ पैसा रहेको थियो ।रिंगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ०५ पैसा बिक्री दर २७ रुपैयाँ २० पैसा पुगेको छ ।हिजो खरिददर २७ रुपैयाँ १० पैसा बिक्रीदर २७ रुपैयाँ २४ पैसा रहेको थियो ।
कोरियन वनको भाउ आज बिहीबार केही घटेको छ । १ सयको खरिददर ९ रुपैयाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ४९ पैसा पुगेको छ । हिजो खरिददर ९ रुपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ५३ पैसा रहेको थियो ।कुवेती दिनार १ को खरिददर ३७३ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३७४ रुपैयाँ ९८ पैसा रहेको छ । हिजो खरिददर ३७२ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर ३७४ रुपैयाँ ९१ पैसा रहेको थियो । यस्तै बहराइन दिनार १ को खरिददर ३०० रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर ३०२ रुपैयाँ २७ पैसा रहेको छ । हिजो खरिददर ३०० रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रीदर ३०२ रुपैयाँ १६ पैसा रहेको थियो ।
डाक्टर सापको मासिक खाजा खर्च पाँच लाख !
पूर्वमेयरको घरमा १३.५ टन सुन ब*रामद, प्रहरी नै अ*चम्मित
दसैंका लागि असोज १० देखि यी स्थानमा साट्न पाइन्छ नयाँ नोट ? नयाँ नोटमा बिगार्नेलाई ३ महिना जे*ल
प्रति नेपाली ऋणदर बढ्यो, अब ३९,३१६ रुपैयाँ ऋण
सामाजिक सेवाका नाममा भित्रिएकाे १ खर्ब २ अर्ब आईएनजीओले लुकाए